Izinto ezi-3 okufanele uzithathe uyebo noma yebo ohambweni | Ukuhamba Okuphelele
Izinto ezi-3 okufanele uzithathe uyebo noma yebo ohambweni
Ukuhamba kwe-Absolut | 13/12/2021 11:59 | Kubuyekezwe ku- 15/12/2021 12:04 | abanye
Manje njengoba isimo esidalwe ukufika kwalolu bhubhane sibonakala sihamba kancane ukubuyela esimeni esijwayelekileAbaningi bethu bazilungiselela, eholidini elilandelayo, ukuthatha uhambo esinganqamula ngalo ekucindezelekeni nasekukhathazekeni okungaka. Ukuze senze lokhu, kufanele sihlele ngokucophelela umzila wezivakashi esizowulandela ukuze siqinisekise ukudlula kwethu izindawo nezindawo eziheha izivakashi okubaluleke kakhulu endaweni esiya kuyo.
1 Izinto ezi-3 okufanele uziphathe epotimendeni lakho
1.1 Lungiselela kahle izingubo ozozigqoka
1.2 Ungakhohlwa ugesi wakho
1.3 Qinisekisa inhlanzeko yakho ngemikhiqizo yenhlanzeko
Izinto ezi-3 okufanele uziphathe epotimendeni lakho
Esinye isici okufanele sisicabangele izinto okumelwe sihambe nazo ohambweni lwethu. Kunamalungiselelo amaningi kangangokuthi, izikhathi eziningi, siyawaqeda ekhungathekile nokupakisha okungalungile futhi ngomzuzu wokugcina. Ukuze ugweme lolu hlobo lwesimo, sizokuklelisa ngezansi izinto ezi-3 okufanele uhambe nazo ukuze uhambe ohambeni.
Lungiselela kahle izingubo ozozigqoka
Nakuba kusobala, kumelwe sibe nakho Izingubo ezifanele ukuya ngokunethezeka ngangokunokwenzeka endaweni yethu yezivakashi. Ngale kwezingubo zangaphansi esizozigqoka, kufanele sivumelanise izinketho zethu nezimo sezulu esizosithola lapho: uma ulinda. amazinga okushisa aphansi, lungisa amagilavu, izigqoko, izikhafu nama-sweatshirts; kunalokho, uma ulinda shisa ngempela phakathi nohambo lwakho, zihlomise nge ama-shorts, amahembe kanye nezikibha ezinemikhono yezinhlamvu. Uma kukhona ulwandle eduze, ungakhohlwa i-swimsuit yakho!
Ukwenza kube lula ukukhetha izingubo ozozithwala epotimendeni lakho, sincoma ukuthi ukhethe izingubo amasethi ongayisebenzisa futhi ushintshe phakathi nezinsuku zokuhlala kwakho. Uma kwenzeka ukuhlala isikhathi eside, hamba kahle ulayishe izikibha, amabhulukwe nezicathulo zazo zonke izinhlobo.
Ungakhohlwa ugesi wakho
Ukuthuthuka kwezobuchwepheshe eziye zavela eminyakeni yamuva nje ziye zabangela izinkulungwane zemishini kagesi ewusizo kakhulu. Ukudlula i- smartphone kanye neshaja yayo, kufanele siqinisekise ukuthi epotimendeni lethu siphatha ikhamera, ikhompuyutha yethu ephathekayo nebhethri yangaphandle esingashaja ngayo kabusha amadivayisi ethu uma kwenzeka ibhethri liphela.
Lapho uthutha lezi zisetshenziswa, kuzobaluleka bapakishe ngokungcono kakhulu ngangokunokwenzeka ukugwema ukuthi, ngesikhathi sokuthutha, abatholi umonakalo. Ukuze wenze lokhu, zama ukuwaphatha esikhwameni ogibela kuwo noma kubhakha ohlukile ukuze uqinisekise ukuvikeleka kwawo. Uma kwenzeka uzizwa unesibopho sokuyihambisa ngepotimende lakho lokubamba, qiniseka ukuthi uyawafaka indawo yemithwalo emaphakathi.
Qinisekisa inhlanzeko yakho ngemikhiqizo yenhlanzeko
Ngokunokwenzeka, lapho ufika endaweni yakho yokuvakasha, uzobe uhlala endaweni ihhotela enikeza amakhasimende ayo zonke izinhlobo izinto zokuhlanza. Kodwa-ke, uma ungazi ngokuqinisekile ukuthi yimaphi la mathuluzi azofakwa ngendawo yokuhlala, noma uma wazi kodwa ezinye izinto eziyisisekelo azikho, kuzodingeka uthathe Isikhwama sezimonyo nomthwalo ofanele: isixubho, isiqedaphunga, okokuthambisa, okosula, insipho ... njalonjalo.
Njengoba ziyimikhiqizo yokuqinisekisa inhlanzeko ezingxenyeni ezihlukahlukene zemizimba yethu, kumelwe siqiniseke ukuthi zanele ngokwanele igcinwe kahle ukuze zibavimbele ukuthi bangangcoli. Endabeni yamathini omkhiqizo, ngeke kudingeke, kodwa kungase kudingeke ukuthi uwathuthe ngezikhwama ezihlukene ukuze uvimbele ukubamba. ukungcola nomswakama.
Nakuba ungeyona ingxenye yomthwalo, omunye wemikhiqizo okufanele ube nokuzola lapho uya ohambweni muhle. umshuwalense wasekhaya Ngayiphi vikela impahla yakho ekuntshontsheni nakwezinye izigameko ngesikhathi samaholide akho. Khumbula ukubonisana nemibono mayelana nesipho sepholisi esitholakalayo, futhi uqhathanise amanani kanye nekhava ongakhetha, ngaleyo ndlela, leyo evumelana kangcono nezidingo zakho.
Indlela ephelele ye-athikili: Ukuhamba kwe-Absolut » Izinto ezi-3 okufanele uzithathe uyebo noma yebo ohambweni
Ukuvakashela eSri Lanka: ingabe izivakashi zaseSpain zidinga i-Visa?
Ukusebenza phesheya: yimaphi amazwe anesivinini esiphezulu se-fiber?